Melohin’ny Fiangonana Katolika Ny Lalàna Fanamombàna Any Panama · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Marsa 2013 2:37 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, polski, Español
Namoaka lalàna izay mamela ny vehivavy 23 taona no miakatra manan-janaka roa na mihoatra hisafidy malalaka ny ho momba ny Antenimieram-Pirenena Mpanao lalàna tamin'ny 23 febroary 2013.
Nanome fanampim-panazavana ny TVN noticias [es] tao amin'ny tranonkalany:
Manambara ny Làlana laharana-196 fa azo atao ny manamomba ny vehivavy iray raha toa izy manao fangatahana an-tsitrapo malalaka amin'ny dokotera mpitsabo, noho ny antony ara-pahasalamàna, raha toa moa ka hoe kely dia nanambady ilay vehivavy, raha toa izy manan-janaka iray na mihoatra, ary manana porofo milaza fa tsy bevohoka izy izay nomen'ny hopitalim-panjakana, na koa fangatahana ataon'ny mpitaiza azy na izay olona tompon'andraikitra amin'ilay vehivavy amin'ny dokotera izay manamarina fa tsy salama saina ilay vehivavy.
Niteraka fanehoan-kveitra avy amin'ny Fiangonana Katolika ity lalàna ity, izay antsoina hoe fepetra [es] “mihoa-pefy” araka ny nambarany tamin'ny alalan'ny arseveka Metropolitana José Domingo Ulloa. Nitaraina ihany koa ity Arseveka ity fa mametraka an'i Panama ho tandindonin'ny loza amin'ny fiafaràna “antitra be” toy ny firenena Eoropeana maro izay nandray fepetra toy izany koa izy ity.
Nanana fihetseham-po mifangaro ny vahoaka Panameana. Amin'ny lafiny iray, misy ireo mihevitra fa safidin'ny vehivavy manokana ny tsy hiteraka intsony ary tsy manana zo ny hanome ny heviny amin'ny karazana lalàna toy itony ny fiangonana, fa ny hafa kosa tohina tamin'ity lalàna famonoana “aina” ity.
Mihevitra i Ernesto Alvarado fa tanora loatra ny 23 taona ho an'ity dingana ity ary mety hanenina amin'ny hevitra noraisiny ireo vehivavy. Nanoratra toy izao i Ernesto ao amin'ny Hora Cero [es]:
Katedralin'ny tanàna Metropolitana ao Panama, sary nalaina tao amin'ny Flickr an'i Javier Volcan teo ambany fahazoan-dalana Creative Commons (CC BY-NC-SA 2.0)
Ny loza azoko an-tsaina dia ny amin'ny taonan'ilay olona. Any Espana, 1 amin'ny olona 100 nanao ny fahamombana tamin'ny fitaovana tsy fampiterahana no mitady ny fomba hanalana izany indray noho ireto antony ireto: niova olona niarahana, fahafatesan'ny zaza, nihatsara ny fahasalamana na ny toerana sosialy misy azy, na noho ny antony ara-psikolojia.
Isan'ny olona manohana ny hevitra fa tokony ho vahan'ny Fiangonana Katolika aloha ny olana anatiny alohan'ny anambaràny ny heviny momba ny tsy fiterahana intsony i Yohel Amat (@te_interesa) [es]:
@te_interesa: Inona àry no idiran'ny mpitondratenin'ny Katolika amin'ny tsy hiterahan'ny vehivavy intsony raha ry zareo aza manana ny olany maro? #WTF #Panama
Milaza i Alfonso Grimaldo (@AlfonsoAGP) [es] fa tompon'andraikitra amin'ny fanapahan-keviny heveriny fa tsara ho an'ny tenany ny olona tsirairay :
@AlfonsoAGP: Ny vatanao, safidinao. Izay foana. Tsy hisy mihitsy amintsika hanaiky olona hafa hiteny hoe toy izao no tokony hiainanao.
Mangataka ny fiangonana i Xavier (@tortugaconqueso) [es] tsy hametraka an-tery ny heviny amin'ny hafa:
@tortugaconqueso:Tazomy ho anao ao anatin'ny tempolinao ny fijerinao mikasika ny tokony hataon'ny fiarahamonina ary alaviro ny vahoaka izany azafady.
Mizarazara ny fomba fijery ary misy aza ireo Kristiana no manaiky ity lalàna vaovao ity, izay mahatonga ny fifangaroana eo amin'ny tena fanehoan-kevitra marin'ny Fiangonana Katolika, hoy i Ana Lorraine J. (@analorrainej) [es] :
@analorrainej: Tsy haiko ianao, fa izaho aloha nahita relijiozy nanaiky ity lalàna ity ka tsy azoko ny fihetsik'i Ulloa.
Mbola miandry ny sonian'ny filoha ilay lalàna, kanefa toa tsinjo fa hoarahana ny tenin'ny Fiangonana Katolika, satria nanome toky ny hiresaka amin'ny Filoha Ricardo Martinell ny Filohan'ny Antenimieram-Pirenena Mpanao Lalàna, mba hanao fanovàna maromaro, araka ny notaterin'i La Critica [es]:
Nanipika i Gálvez fa hiresaka amin'ny Filoha Ricardo Martinelli ny tenany hijerena ny olana sasantsasany izay lavin'ny Fiangonana Katolika fa tokony asiana fanovàna.